कन्सर्टा बनाम Adderall: भिन्नता, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी समाचार, कल्याण कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण मनोरञ्जन कल्याण कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय प्रेस औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> कन्सर्टा बनाम Adderall: भिन्नता, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
कन्सर्ट्टा (मेथिलफेनिडेट) र एडडेराल (एम्फैटामिन / डेक्स्ट्रोमफेटाइन) दुई उत्तेजक औषधिहरू हुन् जुन उपचार गर्न सक्छन् एडीएचडी , वा ध्यान घाटा hyperactivity अवरोध। एडीएचडीको साथ बाँचिरहेका धेरै व्यक्तिहरूको लागि, व्यवहार उपचार र प्रिस्क्रिप्शन उत्तेजकहरू प्रभावकारी उपचार हुन्। जबकि त्यहाँ धेरै उत्तेजक ड्रग्स उपलब्ध छन्, यो कहिलेकाँही उत्तम विकल्प पाउन गाह्रो हुन सक्छ।
CNS (केन्द्रीय स्नायु प्रणाली) उत्तेजकहरूले दिमागमा डोपामाइन र नोरपाइनफ्रिनको पुनःअपटेक रोक्दै उस्तै तरीकाले कार्य गर्दछ। तिनीहरूको पुनःअपटेक अवरुद्ध गरेर, कन्सर्ट्टा र एड्डेलरले यी न्युरोट्रान्समिटरको प्रभावलाई बढावा दिन फोकस र ध्यान सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि यी एडीएचडी औषधीहरूले समान तरिकाले काम गर्दछन्, तिनीहरू समान छैनन्।
कन्सर्ट्टा र एड्डरलमा उनीहरूको कति छिटो काम गर्दछन्, उनीहरूको प्रभावहरू कति लामो हुन्छ र तिनीहरू कसरी बनाइन्छन् त्यसमा केही भिन्नताहरू छन्। तिनीहरूको भिन्नताहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस् ताकि तपाईं वा तपाईंको बच्चाको लागि उत्तम उपचार पत्ता लगाउन तपाईंको डाक्टरसँग काम गर्न अधिकार दिन सक्नुहुन्छ।
कन्सर्ट्टा र एड्डेलराल बीचका मुख्य भिन्नताहरू के हुन्?
कन्सर्ट्टा र एडडेराल बीचको प्राथमिक भिन्नता भनेको यो छ कि कन्सर्टमा मेथिल्फेनिडेट हुन्छ र एडडेरालमा एम्फेटामिन नुन हुन्छ। अधिक विशेष रूपमा, Adderall एम्फीटामाइन र dextroamphetamine को एक संयोजन समावेश गर्दछ।
Adderall को तुलनामा, Concerta को प्रभाव लामो समय सम्म रहन्छ र समयको साथ बिस्तारै रिलीज हुन्छ। कन्सर्ट्टा दैनिक रूपमा एक पटक लिन्छ जब एडेलरल दिनभरि धेरै पटक लिनु पर्छ।
यसको उन्नत संग trilayer निर्माण, Concerta पहिलो ट्याब्लेट तह भंग पछि एक घण्टा भित्र काम सुरु गर्दछ। त्यसो भए, औषधी बिस्तारै समयसँगै छ कि शीर्ष स्तर छ छ देखि 10 घण्टा सम्म पुग्न जारी गरीन्छ।
कन्सर्ट्टा जस्तो नभई, एडडेरालको चरम स्तरहरू यसलाई लिने पछि hours घण्टामा पुग्न सकिन्छ। यस कारणका लागि, तत्काल रिलीज Adderall सामान्यतया हरेक तीन देखि चार घण्टा लिन्छ।
सम्बन्धित: कन्सर्ट विवरणहरू अतिरिक्त विवरणहरू मेथेलफिनिडेट विवरणहरू
कन्सर्ट्टा र Adderall बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग CNS उत्तेजक CNS उत्तेजक
जेनेरिक नाम के हो? मेथेलफेनिडेट डेक्सट्रोम्पेटामाइन / एम्फेटमाइन साल्टहरू
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज मौखिक ट्याब्लेट
मौखिक क्याप्सूल, विस्तारित रिलीज
मानक खुराक के हो? १ or वा mg 36 मिलीग्राम दैनिक बिहान एक पटक।
बच्चाहरूमा प्रति दिन mg 54 मिलीग्राम र किशोर र वयस्कहरूमा प्रति दिन mg२ मिलीग्रामभन्दा बढी नहुन साप्ताहिक अन्तरालमा खुराक १ 18 मिलीग्रामले बढाउन सक्छ। बिहान एक पटक to देखि mg० मिलीग्राम र डाक्टरले निर्देशन गरे अनुसार प्रत्येक to देखि hours घण्टा।
साप्ताहिक अन्तरालमा खुराक mg मिलिग्रामले दिन प्रति दिन mg० मिलीग्रामभन्दा बढी नबढाउन सक्छ।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? उपचारको अवधि तपाइँको डाक्टरको नैदानिक ​​निर्णयमा आधारित छ। उपचार प्रायः दीर्घकालीन हुन्छ। उपचारको अवधि तपाइँको डाक्टरको नैदानिक ​​निर्णयमा आधारित छ। उपचार प्रायः दीर्घकालीन हुन्छ।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र children बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरु र 65 65 बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरु वयस्क र तीन बर्ष र माथिका बच्चाहरु
सर्तहरू कन्सर्टा र Adderall द्वारा उपचार
कन्सर्ट्टा वयस्कहरूमा एडीएचडीको उपचारको लागि एफडीए-अनुमोदित छ, किशोरावस्था , र years बर्ष र माथिका बच्चाहरु। Patients 65 बर्ष र अधिक उमेरका बृद्ध बिरामीहरूका लागि कन्सर्टको सिफारिस अक्सर गरिन्छ।
एडीएचडी को मुख्य लक्षणहरु मा ध्यान नदिई, hyperactivity, आवेग, र छोटो ध्यान अवधि छ। ADHD भएका व्यक्तिहरूले अन्य व्यवहार, संज्ञानात्मक, र मुड-सम्बन्धित लक्षणहरू पनि अनुभव गर्न सक्दछन्।
Adderall एफडीए-अनुमोदित छ ADHD मा उपचार गर्न वयस्कहरू र बच्चाहरू। यो अत्यधिक दिनको निन्द्रा र निद्रा आक्रमणको गहन एपिसोड द्वारा विशेषता एक निद्रा विकार, नारकोलेप्सीको उपचार गर्न पनि अनुमोदन गरिएको छ। उनीहरुलाई नार्कोलेप्सी हुने प्रायः Provigil (modafinil) मा शुरू गरिन्छ Adderall जस्तै अर्को औषधी प्रयोग गर्नु अघि।
कन्सर्ट्टा र एडलेरलले एडीएचडी र अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै उदासीनता, चिन्ता, र / वा द्विध्रुवी विकार । यद्यपि, तिनीहरूको अफ-लेबल यी सर्तहरूको लागि प्रयोग विवादास्पद मान्न सकिन्छ र अझै अध्ययन भइरहेको छ।
सर्त कन्सर्ट Adderall
डिप्रेसन, चिन्ता, वा द्विध्रुवी विकार ADHD सँग सम्बन्धित अफ-लेबल अफ-लेबल
के कन्सर्ट्टा वा एडेराल अधिक प्रभावकारी छ?
कन्सर्ट्टा र एड्डेलरल दुबै प्रभावकारी औषधीहरू हुन् जसले ADHD लाई उपचार गर्न सक्दछ। यद्यपि, एक दवालाई केहि उदाहरणहरुमा अर्को भन्दा माथी मन पराइएको छ।
२०१ 2018 मा मेटा-विश्लेषण , यो पत्ता लाग्यो कि methylphenidate बच्चाहरू र किशोर किशोरीहरूमा ADHD को पहिलो लाइन उपचारको रूपमा राम्रो हुन सक्छ। एडीएचडीको साथ वयस्कहरूको लागि, एम्फेटामाइनहरू अन्य औषधीहरू भन्दा राम्रो हुन सुझाव दिइन्थ्यो। अध्ययनले मोडाफिनिल र एटोमोक्सेटीन जस्ता अन्य औषधिहरू पनि तुलना गर्‍यो।
अर्को मेटा-विश्लेषणले देखायो लामो-अभिनय उत्तेजकहरू द्रुत रिलीज उत्तेजकहरू भन्दा राम्रो हुन सक्छ किनकि तिनीहरू दिनको दुई वा तीन पटकको तुलनामा दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ। अध्ययनले उत्तेजकहरूलाई बिउप्रोपियन, क्लोनिडाइन, र ग्यानफासिन जस्ता गैर-उत्तेजकहरूसँग पनि तुलना गरेको छ। समग्रमा, उत्तेजक एडीएचडीका लागि गैर-उत्तेजकहरू भन्दा बढी प्रभावकारी पाए।
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग तपाईंको उपचार विकल्पहरू छलफल गर्न सिफारिस गरिन्छ। तपाईको समग्र अवस्थाको मूल्या After्कन पछि, तपाइँको डाक्टर तपाइँ वा तपाइँको बच्चाको लागी सही औषधि लेख्न अझ राम्रोसँग सुसज्जित हुनेछ।
कभरेज र लागत तुलना कन्सर्टा बनाम
कन्सर्ट्टा जेनेरिक विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ। जेनेरिक कॉन्सर्टा प्रायः अधिकांश मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छ। कन्सर्ट्टाको औसत खुद्रा मूल्य tablets० ट्याब्लेटको लागि $ 300 भन्दा बढी खर्च हुन सक्दछ। जो मानिसहरू आफ्नो पर्चेको औषधिहरुमा अधिक बचत गर्न चाहान्छन्, एक एकलकेयर छुट कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। जे होस् तपाईसँग बीमा छ, तपाई कन्सर्ट्ताको मूल्य १$० डलर तल घटाउन उच्च कोपेको सट्टा छुट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
एडरेलोर अधिकांश मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा कभर गरिएको हुन्छ जब यो जेनेरिकको रूपमा दिइन्छ। Adderall को औसत लागत $ 150 भन्दा अधिक हुन सक्छ। यद्यपि, एकलकेयर डिस्काउंट कार्डको साथ, तपाईं अधिक बचतको लाभ लिन सक्नुहुनेछ लागत reduce $ around को लागी घटाउनको लागि। तपाई एकलकेयर खोजी उपकरण जाँच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कति बचत गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नका लागि। तपाई कुन फार्मेसीमा जानुहुन्छ त्यसको आधारमा मूल्यहरु फरक हुन सक्दछ।
मानक खुराक १ mg मिलीग्राम, tablets० ट्याब्लेटको मात्रा Mg० मिलीग्राम, tablets० ट्याब्लेटको मात्रा
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे0२0० $ 7– $ 78
एकलकेयर लागत 8 १२8 + । -$- $ .$
कन्सर्ट्टा बनाम Adderall को सामान्य साइड इफेक्ट
कन्सर्ट्टा र एडडेरलसँग सम्बन्धित सामान्य दुष्प्रभावहरूमा टाउको दुख्ने, सुख्खा मुख, मतली, र अनिद्रा समावेश छ। अन्य उत्तेजक साइड इफेक्टमा चिन्ता, चक्कर, र चिढचिलोपन शामिल छन्।
सीएनएस उत्तेजकहरू जस्तै कन्सर्ट्टा र एडडेराल पनि भूख कम गर्न परिचित छन्। यस कारणका लागि, यी औषधिहरूले केही व्यक्तिहरूमा तौल घटाउन निम्त्याउँदछ।
कन्सर्ट्टा र एडेलरलको गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा रक्तचाप र मुटुको दर बढेको, विशेष गरी हृदय समस्या भएका वा उच्च रक्तचाप । यी साइड इफेक्टले अझ गम्भीर जटिलता निम्त्याउन सक्छ यदि राम्रोसँग निरीक्षण गरिएको छैन भने।
टाउको दुखाई हो २२% हो * रिपोर्ट गरिएको छैन
सुख्खा मुख हो १%% हो *
मतली हो १%% हो *
अनिद्रा हो १२% हो *
चिन्ता हो %% हो *
भोक कम भयो हो २%% हो *
चिडचिलोपन हो %% हो *
पेट दुख्ने हो %% हो *
पसिना बढेको हो %% हैन -
स्रोत: डेलीमेड ( कन्सर्ट ), डेलीमेड ( Adderall )
के म tamiflu लिँदा रक्सी पिउन सक्छु?
कन्सर्टा बनाम Adderall को ड्रग अन्तरक्रिया
केही अन्य लागूपदार्थको प्रयोग गर्दा कन्सर्ट्टा र एड्डेलरलबाट अलग रहनु पर्छ। यी औषधिहरू मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधक (MAOI) को साथ लिनुहुन्न। तिनीहरू पनि एक MAOI औषधि रोके पछि १ days दिन भित्र लिनु हुँदैन। कन्सर्ट्टा वा एएडीओएलएआरए साथ एक MAOI ले हानिकारक उच्च रक्तचाप, वा उच्च रक्तचाप संकट जस्तै प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ।
एडीएचडी औषधि जस्तो कन्सर्ट्टा र एडेलरलले रक्तचाप बढाउन सक्छ। व्यक्ति जो रक्तचाप औषधी, वा एन्टीहाइपरटेन्सिभ लिइरहेका छन्, एक उत्तेजक लिने बखत यी औषधिहरूको प्रभावकारिता कम देख्न सक्छन्।
एन्टिकोनवल्सेन्ट्स र सेरोटोनर्जिक ड्रग्सको डोज समायोजन गर्न आवश्यक हुन सक्दछ जब कन्सर्टा वा एडडेराल लिँदा। यी औषधिहरूको साथ Concerta वा Adderall लिनाले रगतको स्तर बढाउन र प्रतिकूल प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ।
एडलेरलले ड्रग्ससँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ जसले कलेजोमा CYP2D6 एंजाइम रोक्दछ। क्विनिडाइन र रितोनाभिर जस्ता औषधिहरूले एडडेरलको मेटाबोलिज्म बिरूद्ध गर्दछ र यसको रगतको मात्रा बढाउन सक्छ। यी औषधिहरू सँगै लिँदा Adderall सँग सम्बन्धित साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ।
औषधि ड्रग क्लास कन्सर्ट Adderall
Phenelzine मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs) हो हो
अमलोडिपाइन Antihypertensives हो हो
Citalopram सेरोटोनर्जिक ड्रग्स हो हो
फ्लुओक्सेटीन CYP2D6 अवरोधकर्ताहरू हैन हो
यो सम्भावित सबै औषधी अन्तरक्रियाहरूको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। तपाईंले लिनुहुने सबै औषधीहरूको साथ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
कन्सर्ट्टा र Adderall को चेतावनी
कन्सर्टा र Adderall हो तालिका दोस्रो डीईए अनुसार नियन्त्रित पदार्थहरू। यसको मतलब यो हो कि यी औषधिहरूको दुरुपयोग र निर्भरताका लागि उच्च क्षमता छ। उत्तेजकहरूको अचानक रोकथामले थकान, थरथर, र निद्रा समस्या जस्ता फिर्ती लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ। डाक्टरको प्रिस्क्रिप्शनको साथ यी औषधिहरू मात्र प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
सीएनएस उत्तेजकहरू स्ट्रोक, हार्ट अट्याक, र केहि व्यक्तिहरूमा अचानक मृत्युको जोखिम बढाउन फेला परेका छन्। व्यक्ति जोसँग मुटुको अवस्था जस्तै मुद्दाहरूको ताल समस्या वा कार्डियोमायोपाथीले कन्सर्टा वा एडडेराल जस्ता उत्तेजक ड्रग्सको प्रयोगबाट टाढा रहनु पर्छ।
उत्तेजक ड्रग्सले सामान्य खुराकमा रक्तचाप र मुटुको दर बढाउन सक्छ। यी क्षेत्रहरूमा समस्या भएका व्यक्तिहरूले सावधानीका साथ उत्तेजक प्रयोग गर्नु पर्छ। अन्यथा, लगातार रक्तचाप अनुगमन सिफारिस गरिन्छ।
कन्सर्ट्टा र एडडेरलले लामो अवधिमा प्रयोग हुने बच्चाहरूमा विकास चरणहरूमा असर गर्न सक्छ। उत्तेजकहरूमा बच्चाहरूमा समय-समयमा उचाई र तौल मापन गर्नुपर्छ।
कन्सर्ट्टा बनाम Adderall को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
कन्सर्ट्टा मेथिलफिनिडेट एक्स्टेन्ड-रिलीज ट्याब्लेटहरूको लागि ब्रान्ड नाम हो। वयस्क र years बर्ष र अधिक उमेरका बच्चाहरूमा ADHD लाई उपचार गर्न FDA- अनुमोदित छ। कन्सर्ट्टा एक पटक खानाको साथ वा बिना दैनिक लिन्छ।
Adderall एम्फीटामाइन र dextroamphetamine लवण को एक संयोजन समावेश गर्दछ। वयस्क र years बर्ष र सो भन्दा बढि उमेरका बच्चाहरूमा ADHD र narcolepsy को उपचार गर्न अनुमोदित भएको छ। Adderall जेनेरिक औषधि को रूप मा उपलब्ध छ र सामान्यतया हरेक चार देखि छ घण्टा लिन्छ।
के कन्सर्ट्टा र एडरेल समान छ?
होईन। तिनीहरू समान तरिकाले कार्य गर्दछन्, कन्सर्ट्टा र Adderall अलग सक्रिय तत्वहरू समावेश गर्दछ। कन्सर्टा एक विस्तारित रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा आउँदछ जब एडडेराल तुरून्त रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा आउँदछ।
के कन्सर्ट्टा वा एडेलरल राम्रो छ?
कन्सर्ट्टा र Adderall दुबै प्रभावी ADHD औषधि हो। केहि अध्ययन सुझाव दिनुहोस् कि कन्सर्ट्टा बच्चाहरू र किशोरावस्थाका लागि उत्तम हो जबकि अडेलर वयस्कहरूको लागि उत्तम हो। कन्सर्ट्टा यसको एक पटक दैनिक खुराकको लागि पनि रुचाउन सकिन्छ। तपाईंको अवस्थाको लागि उत्तम औषधि निर्धारित गर्न डाक्टरसँग तपाईंको विकल्पहरू छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
के म गर्भवती हुँदा कन्सर्ट्टा वा एडेलरल प्रयोग गर्न सक्छु?
त्यहाँ छन् पर्याप्त अध्ययन छैन त्यो भन्छन कि कन्सर्ट्टा वा एडेलरल गर्भवती महिलामा सुरक्षित छ। जन्म दोषहरूको जोखिमको कारणले गर्दा, यी औषधीहरू मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि लाभहरू जोखिमलाई बढाउँछन्। यदि तपाइँ गर्भवती वा स्तनपानको समयमा एडीएचडी औषधीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
के म कन्सर्ट्टा प्रयोग गर्न सक्छु वा मदिराको साथ Adderall?
कन्सर्टा वा एडडेराल प्रयोग गर्दा सामान्यतया मदिरा सेवन गर्न सिफारिस गर्दैन। यो मध्यम मा ठीक हुन सक्छ, उत्तेजक ड्रग्स रक्सी वा यसको विपरीत यसको प्रभाव मिश्रित गर्न सक्छन्। रक्सीको प्रयोग पनि दृढ रूपमा सम्बन्धित छ दुरुपयोग र निर्भरता Concerta वा Adderall को साथ।
कन्सर्टटा कति मिग्रा Adderall बराबर छ?
१ मिलिग्राम मेथिलफेनिडेट हो लगभग बराबर ०. mg मिलीग्राम एम्फेटामाइन लवणको। जे होस्, कन्सर्ट्टामा मेथिलफेनिडेटको विस्तारित-रिलीज संस्करण समावेश गरिएको छ, बराबर खुराक स्पष्ट-कट जस्तो हुन सक्दैन। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् ADHD औषधीहरू स्विच गर्ने बारेमा।
के कन्सर्ट्टा तपाईंलाई ऊर्जा दिन्छ?
एक सीएनएस उत्तेजकको रूपमा, कन्सर्टा ऊर्जा स्तर वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ साथ साथै समग्र जागृति र सतर्कता। दिनको समयमा अत्यधिक तन्द्रामा लड्न म्याथिलफेनिडेटलाई कहिलेकाहीं माइनकोलेप्सीको उपचारको रूपमा दिइन्छ। यद्यपि यो प्रभावले केहि मानिसहरुमा अनिद्रा निम्त्याउन सक्छ।
के Concerta डिप्रेशन को लागी प्रयोग गरीन्छ?
Concerta को सक्रिय घटक डिप्रेसन को उपचार को लागी अध्ययन गरीएको छ। एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि मेथिलफिनिडेटले उन्नत मूड र भलाईको भावनालाई सहयोग पुर्‍यायो डिप्रेसनका बृद्ध बिरामीहरू । केहि अवस्थाहरूमा, कन्सर्टा डिप्रेसनको उपचारको लागि अफ-लेबल प्रयोग गर्न सकिन्छ, विशेष गरी ती दुवै जसमा दुबै एडीएचडी र डिप्रेसन छन्।
किन डाक्टरहरूले कन्सर्टटा एडडेरालमा लेख्छन्?
तपाईंको डाक्टरले कुनै पनि कारणहरूको लागि एडडेरालमा कन्सर्टा सिफारिस गर्न सक्दछ। कन्सर्ट्टा प्रायः वयस्कहरू र बच्चाहरूका लागि सिफारिस गरिन्छ जसले एक पटक दैनिक गोली मन पराउँछन्। अन्तमा, तपाईंको डाक्टरको सिफारिश तिनीहरूको आफ्नै नैदानिक ​​निर्णय र अनुभवमा आधारित छ।
यदि तपाईं धेरै गम्भीर भिटामिनहरू खानुहुन्छ भने के हुन्छ?
रक्त प्रकार आहार:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
कति भिटामिन डी ३ तपाइँ दैनिक लिनुपर्छ
एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, र ibuprofen को रूपमा वर्गीकृत छन्:
योजना बी गोली तपाईं कहिले सम्म पर्खन सक्नुहुन्छ
naproxen एक दुखाई निवारक वा मांसपेशी आराम छ
ज्वरो आएपछि म के खान सक्छु?
शरीर मा कम पोटेशियम को कारण